चिनियाँ प्राध्यापक वाङ डङ भन्छन् : बिआरआईले नेपालको समृद्धिमा सघाउँछ
सर्वोच्चको पत्र पर्खँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । व्यावसायी अजय सुमार्गी खाताबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालबाट पत्र आएपछि पक्रियाअघि बढाइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य तोलाको ६० हजार ७ सय
काठमाडौँ । आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । बिहीबार तोलाको ६० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो ।
सहकारीकाे बचत तीन खर्ब दुई अर्ब, ऋण प्रवाह दुई खर्ब ७२ अर्ब
काठमाडौँ । नेपालका सहकारीमा रु. तीन खर्ब दुई अर्ब बचत सङ्कलन भएको छ ।
गरीब नेपालीलाई धनी व्यक्तिसरह पुग्न एक लाख वर्ष लाग्ने
काठमाडौँ । नेपालमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति र अति कम गरीब नेपालीको सम्पत्ति असमानताको अन्तर कति होला ? मुलुकमा समृद्धि र समानताको सपना देखाइएका बेला यो प्रश्न सान्दर्भिक हुन गएको छ ।
काठमाडौँ । कुमारी बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई आठ दशमलव पाँच प्रतिशत शेयर लाभांश दिने भएको छ ।
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा सामान्य विन्दुले वृद्धि भएको छ ।
हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फको मूल्य घट्यो
काठमाडौँ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएसँगै आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु. १० का दरले घटाएको छ ।